Umama siyakuhalalisela ngosuku esenzeka
Umama - umuntu abaseduze futhi lwendabuko emphilweni ngamunye wethu, ngoba emhlabeni akukho yizinto ezibaluleke kakhulu kunokwenza ngesisa sakhe nothando. Umlando ubudlelwane phakathi umntwana nonina - indaba injabulo, ukunakekelwa kanye nokuziqhenya, nobuhlobo bazo kuqala kudala ngaphambi kokuba ukuhlangabezana okokuqala.
Yini ukunikeza lowo muntu ukuthi wanikela ngokuphila kwakho? Kuphela ngomusa wakhe, uthando nemizwa ngobuqotho. Kodwa uma ufuna congratulation ngosuku esenzeka ngalo umama gade iqakatheke khulu kuye, ukulungiselela isimanga sangempela wakhe!
Usuku lokuzalwa oluhle - isizathu esikhulu ukuze ubonise bonke amakghonwabo namakhono. Ukucabanga ukubingelela yokugubha usuku umama, vele uzame hhayi ukuchitha imali kwi trinket, bese beveza isipho nangamazwi bebodwa. Khumbula ukuthi umama wajabulela isicelo sakho bese amakhadi okuzenzela. Ingabe yena uthanda ukuzwa imizwa ezintsha kusukela okuzikhulula ezinikelwe? Ngisho noma ubona injabulo ebusweni bakhe, musa qiniseka ukuthi uthando ngoJehova luqotho. Nakuba, umama - lena umuntu bazokujabulela iyiphi izindlela zakho, ngabe kungcono ukuncoma noma uhambo phesheya njengomkhaya.
Cooking Mama siyakuhalalisela ngosuku esenzeka, original futhi sithembeke. Eqinisweni, beveza inkondlo yakho akunzima kangako, noma kungaba encane noma esigaba inkondlo. Into esemqoka ukuthi yalotshelwa inhliziyo futhi kusuke enhliziyweni. Tinkondlo kungenzeka yamahlaya, ezihlekisayo. Uma une talent ekhethekile, bese siyakuhalalisela ngosuku esenzeka umama kungenziwa yalotshwa njengezingoma zohlobo oluthile izingoma. Iphendule lonke uthando imizwa abaqotho ukuba siqu othandekayo wabo. Yiqiniso, amaculo kanye izinkondlo for umama kungatholakala kuyi-Internet, kodwa ukuthi kuyoba isipho esihle?
Umama congratulation ngosuku esenzeka e temibhalo yephrozi netindzaba:
"Uthando lwami, umama wami othandekayo! Kulesi iholidi emangalisayo zonke izipho, izimbali, angiqabule futhi basanga nje ngawe! Ake nenjabulo nempumelelo nabangane bakho okunokwethenjelwa iminyaka eminingi ezayo. Ake ukufeza zonke amaphupho akho zigcwaliseka, futhi olandelayo uyohlale umndeni abakhulu injabulo ngaphandle okuyinto akunakwenzeka! "
Kulabo omama ungathandi verbosity futhi azizondayo ukuthopha, okwaziyo futhi SMS ukubingelela. Smska ekuseni ngamazwi anomusa lokuzalwa ukunikeza umama wakho, ubhekene necala omuhle futhi ajabule lonke usuku, kodwa ungalawulwa engavimba ke. Ayikho zokuxhumana, noma ngisho incwadi, musa esikhundleni amagama akhulunywa iso. Noma ngubani kithi ukunakwa ezibizayo, ikakhulukazi ngosuku lwakhe lokuzalwa, kodwa ngayiphi indlela Uzonikezwa uphawu ukunakwa - kubalulekile.
Lapho izingane ziye zakhula, ngezinye izikhathi engaqondile push abazali babo eceleni waphinda ukukhohlwa ukubiza noma vakashela. Khumbula ukuthi ibuphi ubudala, kubalulekile obathandayo futhi ayithandayo ukunakwa abanike kona. Ake kusihlwa ngesikhathi samaholide, kathathu ngoba umama ku lwakhe lokuzalwa - kuyoba isimanga emangalisayo.
Ilungiselela nomqondo kusihlwa, cabanga zonke izifiso izihlobo nabangane umama. Lokhu kungaba cruise, futhi ensimini uhambo kulo lonke inkampani friendly futhi enomsindo. Uma traditionalist, uhlale ekhaya noma cottage futhi bahlele ukubingelela umama ngosuku esenzeka lapho. Lungiselela esidlweni esikhethekile, umeme izivakashi kanye ukuhlobisa indlu ukufika kwazo. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi unyoko ngalolu suku akufanele zibasize endlini, ngoba usuku lomkhosi wakhe, yingakho umsebenzi walo abe ukuphumula futhi wamukele siyakuhalalisela kusuka abangane nezihlobo.
Yiqiniso, kungenzeka ukubamangaza unina, umeme umngani wakho kobana yokudlela noma enikeza ithikithi resort noma esibhedlela. Makube yakho yangempela bingelela umama wakhe ngosuku esenzeka. Cabanga lapho ayefuna ukuya ngonyaka odlule, kodwa ukuthi ngeke sikwazi ukulithenga ngenxa kwanoma yiziphi izimo. Umsebenti wakho: ukuze nixazulule noma iyiphi inkinga futhi ahlinzeke unina iholidi omkhulu yedwa noma nenkampani yakho.
Kungakhathaliseki siyakuhalalisela ngosuku esenzeka ngalo unina, inqobo nje kwaba ngobuqotho futhi ezithakazelisayo. Zama ukwenza lolu suku elimangalisayo kakhulu futhi kumnandi, ukuvikela othandekayo kusuka zonke izinkinga nezinsizi zakho. Futhi ngiyabathanda abazali bakho, ungakhohlwa ngazo oyophinde.
Izilokotho zosuku lokuzalwa kugogo wakhe umzukulu
Lapho ezimali kugujwa uSuku emhlabeni?
Januwari 16 - Umhlaba Usuku "The Beatles"
Usuku Ministry Interior Russia noSuku ochwepheshe forensic
Audit izibalo nesabelomali
Hop Izigaxa, kusetshenziswa imithi nezinye izimboni
Inqubo zomlando namasiko nezincwadi periodization Russian. I periodization kwezincwadi Russian of 19-20 eminyaka: etafuleni
Chaos knight, Dota 2: Umhlahlandlela, incazelo kanye ikakhulukazi ukudlula
Isibindi - kuyinto ... Ukubaluleka kwalokhu umuzwa ukuba umuntu
Simple futhi esheshayo dessert - khekhe Puff ushokoledi
Uyazi yini ukuthi ukupheka inyama French?
Indlela yokubona aspen kwamanga?
Ngama-carbon nanotubes: ukukhiqizwa, ukusetshenziswa, izakhiwo
Dmitry Martynov: Biography of nomdlali abasha abanamakhono
Proton-futha inhibitor: mshini wezenzo kanye nesicelo ku imithi